မြေရှားသတ္တုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ - အပိုင်း (၂) တူးဖေါ်ရေး
ဒီတပတ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြေရှားသတ္တုကို ဘယ်လို တူးဖေါ်နေတယ် ဆိုတာကို ဓါတ်သတ္တုရှာဖွေရေးနဲ့ တူးဖေါ်ရေးပညာရှင် ဦးစောနောင်ကို မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးမှာပါ။
မေး။. ။“မြန်မာနိုင်ငံ ပန်ဝါဒေသက မြေရှားသတ္တုထုတ်လုပ်ပုံကို နဲနဲ ရှင်းပြပေးပါဆရာ။ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ထုတ်ပါသလဲဆရာ။”
ဦးစောနောင်။. ။“ပန်ဝါမှာကတော့ ပင်ရင်းသိုက်အနေနဲ့ တူးနေတာက များတယ်။ ဒါမျိုး ပင်ရင်းသိုက်ကို တူးမယ်ဆိုရင်၊. ပထမတော့ သူက သတ္တုသိုက်ရှိတဲ့နေရာရဲ့ မြေပေါ်မြေအောက် ရေစီးဆင်းပုံ အနေအထားတွေ၊ ဒီ hydro geologic structure ပေါ့။ နောက်တခုက joint pattern တွေ၊ ကျောက်တွေရဲ့ အက်ပြိုင်စံနစ်တွေကို လေ့လာရမယ်။ နောက်ပြီးရင် ဒီသတ္တုသိုက်ရဲ့ တည်နေပုံ အနေအထားတွေကို ပထမ လေ့လာဖို့ လိုတယ်။ ဒါပြီးမှ လိုအပ်သလို drill hole တွေ တူးမယ်။ လိုအပ်သလို စိုက်ကျင်းတွေ တူးဖေါ်မယ်။ တူးဖေါ်ပြီးလို့ရှိရင် အောက်မှာ ရေမစိမ့်နိုင်တဲ့ ကန်တွေ၊ ကွန်ကရိကန်လိုမျိုးပေါ့။ ကန်အဆင့်ဆင့်ကို ပြင်ဆင်ရမှာ။ အဲဒါတွေ အားလုံးကို ပြင်ဆင် ပြီးတော့ကျမှ အမိုနီယမ် ဆာလ်ဖိတ်ကို သူက ဖိအားနဲ့ပန်းထည့်လိုက်တာ၊ ဒီတွင်းတွေ ထဲကို ပေါ့နော်။ ဒီအမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်တွေက ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ သတ္တုတွေကို သွားပြီးတော့ leaching လုပ်တယ်။”
မေး။. ။“ဖျော်ထုတ်တာ ပေါ့နော်။”
ဦးစောနောင်။ ။“ဟုတ်တယ်။ စားပြီး ပျော်ဝင်စေတာပေါ့။ ပျော်ဝင်စေပြီးရင် သူက အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ထုတ်ပေးတယ်။ ဒီ ကယ်မီကယ်တွေက စားပြီးရင် သူက အဆင့်ဆင့်နဲ့ စောစောက လုပ်ထားတဲ့ ကန်တွေထဲကို သူ့ဟာနဲ့သူ စီးဝင်ကြတာပေါ့။ သူက စီးဝင်ရင်း စီးဝင်ရင်းနဲ့ တဖြေးဖြေးနဲ့သန့်စင်တဲ့ မြေရှားပျော်ရည်တွေ ရရှိလာတာပေါ့။ အဲနောက်ဆုံးမှာ သူက မြေရှားပြည့်ဝပျော်ရည်တွေ အဆင့်ကို ရောက်လာတာပေါ့။
အဲဒီလို ပြည့်ဝပျော်ရည် အဆင့်ကို ရောက်လာတဲ့ အခါ ကျရင်တော့ သူတို့က အမိုနီယမ် ကာဗွန်နိတ် ဒါမှမဟုတ် အောက်ဆာလိဒ် အက်ဆစ်ကို သုံးပြီးရင်၊ ဒီအထဲကို ထည့်ပြီးရင် သူက ဒီမြေရှား အရည်ကနေ ခဲစေတာပေါ့။ မြေရှား အခဲလေးတွေကို ဖြစ်စေတယ်။ ဒီ rare earth precipitate အခဲလေးတွေကို ရရှိလာတာပေါ့။ အဲဒါကို သူတို့က ခဲလာတဲ့အချိန်မှာ စစ်ယူတယ်။ စစ်ယူပြီးရင် အပူပေးတယ်။ အပူပေးပြီးတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကျနော်တို့ rare earth အောက်ဆိုဒ်ကို ရရှိပြီဖြစ်တယ်။ အဲလိုနည်းနဲ့ပဲ ထုတ်တယ်။”
ဒီနည်းက ဘယ်လောက်အထိ recover ဖြစ်သလဲ ဆိုတော့ over 90 % အထိ ဖြစ်တယ်။ ၉ ၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်ကျော်အထိ ဒီ မြေရှား သတ္တုကို ဖမ်းယူနိုင်တာပေါ့နော်။ ဒါက တရုတ်ပြည် ကျန်စီပြည်နယ် တလျှောက်မှာ လုပ်နေတဲ့ မြေရှားမိုင်းတွေက ဒီ method နည်းကိုပဲ သုံးတယ်။ ဒီနည်းကတော့ Insitu leaching method ပေါ့နော်။ ဒီဟာနဲ့ အသုံးပြုပြီးတော့ ထုတ်နေကြတယ်။”
မေး။ ။“ဟုတ်ကဲ့။ ဒီပန်ဝါဒေသမှာတူးတာဖေါ်တာက ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဓါတု ပစ္စည်းတွေ သုံးပြီး ဖျော်ထုတ်ပြီးတော့မှ မြေရှားသတ္တုကို ရဖို့သန့်စင်ရတယ် ဆိုတော့ ဒါဟာ ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် ပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်စေပါလားဆရာ။”
ဦးစောနောင်။. ။“ဟုတ်ကဲ့။ ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုကတော့ တော်တော်ကို ဖြစ်စေတယ်။ ပြောမယ် ဆိုရင် တရုတ်ပြည် တောင်ပိုင်း ဒီ ပန်ဝါနဲ့ ဆက်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ တရုတ်တွေက ဒီ မြေရှားကို တူးကြတာပေါ့နော်။ တရားမဝင်ပဲ တူးကြတယ်။ တူးကြရင်းကနေပဲ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ တော်တော်ကို ပျက်စီးသွားတော့၊ ပတ်ဝန်းကျင်တော်တော် ပျက်စီးသွားတော့ တရုတ်အစိုးရက နေပြီးတော့ ၂၀၁၀ မှာ ပိတ်ပင်လိုက်တယ်။ ပိတ်ပင်လိုက်တော့ ဟိုမှာ လုပ်နေတဲ့ တရုတ် မြေရှား လုပ်ဖူးတဲ့သူတွေက ကျနော်တို့ နယ်စပ်ကို ဖြတ်ပြီးရင် ဒီပန်ဝါထဲကို ဝင်ရောက်ပြီးရင် ခိုးတူးလာကြတာပေါ့။ အဲလို ခိုးတူးလာတဲ့ အချိန်မှာ ဘာမှ မကြာဘူး။ ဒီပန်ဝါနားမှာ ရှိတဲ့ သူတို့လုပ်ကွက်နားမှာရှိတဲ့ ကျေးရွာတွေ ၂၀ လောက် မှာ ရှိတဲ့ လျှိုမြောင်စိမ့်စမ်းတွေပေါ့။ ဒီရေတွေဟာ တော်တော် ပျက်စီးသွားတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ဒီပန်ဝါဒေသ ဒီမြေရှားလုပ်တဲ့ ဝန်းကျင်တလျှောက်မှာ ရှိတဲ့ ရေဝေရေလဲ တွေက အတော်ပျက်စီးနေပြီလို့ ကချင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့က ဆိုထားတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်တာပေါ့။”
မေး။. ။“ဒီသန့်စင်တဲ့ နေရာကလည်း ကျယ်ပြန့်တယ် ထင်တယ်ဆရာ။ ဒီရေဝေရေလဲတွေ အကုန် ထိခိုက်တယ် ဆိုတော့။ သတ္တုတွေက ဒီအဆိပ် ဓါတုပစ္စည်းတွေ ပြန့်နှံ့တာက တော်တော် နေရာကျယ်ပြန့်နေပြီ ထင်တယ်ဆရာ။”
ဦးစောနောင်။. ။“ဒီပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့က ပြောတာကတော့ အတော်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ ပြောတယ်။ ကျနော့်မိတ်ဆွေတွေ ဆီက ကြားရတာကလည်း ဟုတ်တယ် ရေတွေက သုံးလို့ မရလောက်အောင်ကို ဖြစ်သွားတာ။ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ ချောင်းတွေက ရေတွေဟာ သုံးလို့ မရအောင် ဒီ poison အဆိပ်ချည်းပဲ။ ထိရင် ဒီအရေခွံ- အရေပြားမှာ ထိရင် အရေပြား တခုခု ဖြစ်တာပေါ့။ ဒီ skin disease အရေပြားရောဂါပဲ။”
မေး။. ။“ဆရာ ဒီလိုမျိုး ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက် ပျက်စီးနေတာတွေကို ဘယ်လို တားဆီးနိုင်မယ် ထင်ပါသလဲ ဆရာ။”
ဦးစောနောင်။. ။“အစိုးရ အနေနဲ့ပဲ တာဝန်ယူလုပ်ရမှာပဲလေ။ ဒီအစိုးရအနေနဲ့ အခုသတ္တုထုတ်လုပ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးရင် နံမယ်ကောင်းရှိတဲ့။ အစဉ်လာရှိတဲ့ mining သတ္တုတူးဖေါ်ရေး ကုမ္ပဏီတွေကို လိုင်စင်တို့ ပါမစ်တို့ ထုတ်ပေးပြီး သတ္တုထုတ်စေတာကတော့ အကောင်းဆုံးပဲ။ ပြီးရင်တော့ သူတို့ စာချုပ်ပါ စည်းကမ်း အတိုင်း လုပ်မလုပ် ဆိုတာကို ကျနော်တို့ သက်ဆိုင်ရာ သတ္တုတွင်းဌာန တာဝန်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အနီးကပ်၊ တချိန်လုံး အနီးကပ် ကြီးကြပ်ဖို့ လိုတာပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုး လုပ်နိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ အခုထက် အ များကြီး ပျက်စီးတာ သက်သာမှာတော့ အသေအချာပဲ။”
မေး။ ။“ဆရာ အခု လက်ရှိမှာ မြေရှားသတ္တုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုပ်နေတဲ့ အခြေနေပေါ့နော်။ ဆရာ စောစောက ပြောသလိုဆို တရုတ်နိုင်ငံကပဲ လာပြီး တူးဖေါ်နေကြတယ် ဆ်ိုတော့။ တကယ်ဆို မြန်မာနိုင်ငံမှာက တနိုင်တပိုင် လုပ်နေတဲ့ သူတွေက အများကြီးရှိတယ်။ တကယ်လို့ တနိုင်တပိုင် လုပ်နေတဲ့ မြန်မာတွေ ဒီမြေရှား သတ္တုကို တူးချင် ဖေါ်ချင်တယ် ဆိုရင် လုပ်လို့ ရပါလား ဆရာ။”
ဦးစောနောင်။. ။“လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်လို့ ရတာပေါ့။ လုပ်ဖို့အတွက် လုပ်ကွက် ပါမစ် ရဖို့ လိုတယ်လေ။ အခုကတော့ မရတော့ ခိုးလုပ်နေကြတာကိုး၊ ခိုးလုပ်တော့ ပိုပျက်စီးတာပေါ့။ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ မရစရာ မရှိဘူး။ ဒီ ဓါတုပစ္စည်းတွေပဲ အမှန်ကတော့ လိုအပ်တာပေါ့။ အဓိက ကတော့ ဒီ အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ရယ်။. သူက leaching လုပ်ဖို့အတွက် လိုတယ်။ နောက်တခုက နောက်ဆုံး ပြည့်ဝပျော်ရည်ထဲမှာ မြန်မြန် ခဲသွားအောင် အတွက်ကတော့ ဒီ အမိုနီယမ် ကာဗွန်နိတ် လိုတာပေါ့။
စောစောပိုင်းကတော့ ဒီမြန်မာတွေထဲက ဒီမြေရှားတွေ့တယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဒါတွေကတော့ residual (ကျွင်းစုသိုက်) မျိုးတို့ clay (မြေစေးအမျိုးအစား) သိုက်မျိုးတို့ ။ secondary တွေပေါ့။ အဲဒါတွေမှာ ကျတော့ မြေကလည်း ပျော့တော့ ဒီ ဂဝံကျောက်မြေမျိုး မြေစေးမြေမျိုး တို့ကျ သူက ဘက်ဟိုးတွေနဲ့ ကုပ်ပြီး ဒီထရပ်ကားတွေနဲ့ တင်ပြီး သူတို့ ဒီတရုတ်ကလည်း ဝယ်တယ် အရင်က။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ဒီလိုမဝယ်တော့ဘူးလေ။ သူတို့က သန့်စင်ပြီးမှ ဒါကိုပဲ ယူတော့တယ်။ သူတို့ဆီမှာ ပတ်ဝန်းကျင် အပျက်မခံဘူး ထင်တာပဲလေ။
ဘူမိပညာရှင် ဦးစောနောင်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက မြေရှားသတ္တု အလားအလာနဲ့ ဒီသတ္တုဘယ်လောက် အရေးပါတယ် ဆိုတာတွေကို ဆက်ပြီး တင်ပြပေးအုံးမှာပါ။
မွရှေားသတ်တုနဲ့ မွနျမာနိုငျငံ - အပိုငျး (၂) တူးဖျေါရေး
ဒီတပတျတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ မွရှေားသတ်တုကို ဘယျလို တူးဖျေါနတေယျ ဆိုတာကို ဓါတျသတ်တုရှာဖှရေေးနဲ့ တူးဖျေါရေးပညာရှငျ ဦးစောနောငျကို မေးမွနျးပွီး တငျပွပေးမှာပါ။
မေး။. ။“မွနျမာနိုငျငံ ပနျဝါဒသေက မွရှေားသတ်တုထုတျလုပျပုံကို နဲနဲ ရှငျးပွပေးပါဆရာ။ ဘယျလိုပုံစံနဲ့ ထုတျပါသလဲဆရာ။”
ဦးစောနောငျ။. ။“ပနျဝါမှာကတော့ ပငျရငျးသိုကျအနနေဲ့ တူးနတောက မြားတယျ။ ဒါမြိုး ပငျရငျးသိုကျကို တူးမယျဆိုရငျ၊. ပထမတော့ သူက သတ်တုသိုကျရှိတဲ့နရောရဲ့ မွပေျေါမွအေောကျ ရစေီးဆငျးပုံ အနအေထားတှေ၊ ဒီ hydro geologic structure ပေါ့။ နောကျတခုက joint pattern တှေ၊ ကြောကျတှရေဲ့ အကျပွိုငျစံနဈတှကေို လလေ့ာရမယျ။ နောကျပွီးရငျ ဒီသတ်တုသိုကျရဲ့ တညျနပေုံ အနအေထားတှကေို ပထမ လလေ့ာဖို့ လိုတယျ။ ဒါပွီးမှ လိုအပျသလို drill hole တှေ တူးမယျ။ လိုအပျသလို စိုကျကငျြးတှေ တူးဖျေါမယျ။ တူးဖျေါပွီးလို့ရှိရငျ အောကျမှာ ရမေစိမျ့နိုငျတဲ့ ကနျတှေ၊ ကှနျကရိကနျလိုမြိုးပေါ့။ ကနျအဆငျ့ဆငျ့ကို ပွငျဆငျရမှာ။ အဲဒါတှေ အားလုံးကို ပွငျဆငျ ပွီးတော့ကမြှ အမိုနီယမျ ဆာလျဖိတျကို သူက ဖိအားနဲ့ပနျးထညျ့လိုကျတာ၊ ဒီတှငျးတှေ ထဲကို ပေါ့နျော။ ဒီအမိုနီယမျဆာလျဖိတျတှကေ ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ သတ်တုတှကေို သှားပွီးတော့ leaching လုပျတယျ။”
မေး။. ။“ဖြျောထုတျတာ ပေါ့နျော။”
ဦးစောနောငျ။ ။“ဟုတျတယျ။ စားပွီး ပြျောဝငျစတောပေါ့။ ပြျောဝငျစပွေီးရငျ သူက အညဈအကွေးတှကေို ဖယျထုတျပေးတယျ။ ဒီ ကယျမီကယျတှကေ စားပွီးရငျ သူက အဆငျ့ဆငျ့နဲ့ စောစောက လုပျထားတဲ့ ကနျတှထေဲကို သူ့ဟာနဲ့သူ စီးဝငျကွတာပေါ့။ သူက စီးဝငျရငျး စီးဝငျရငျးနဲ့ တဖွေးဖွေးနဲ့သနျ့စငျတဲ့ မွရှေားပြျောရညျတှေ ရရှိလာတာပေါ့။ အဲနောကျဆုံးမှာ သူက မွရှေားပွညျ့ဝပြျောရညျတှေ အဆငျ့ကို ရောကျလာတာပေါ့။
အဲဒီလို ပွညျ့ဝပြျောရညျ အဆငျ့ကို ရောကျလာတဲ့ အခါ ကရြငျတော့ သူတို့က အမိုနီယမျ ကာဗှနျနိတျ ဒါမှမဟုတျ အောကျဆာလိဒျ အကျဆဈကို သုံးပွီးရငျ၊ ဒီအထဲကို ထညျ့ပွီးရငျ သူက ဒီမွရှေား အရညျကနေ ခဲစတောပေါ့။ မွရှေား အခဲလေးတှကေို ဖွဈစတေယျ။ ဒီ rare earth precipitate အခဲလေးတှကေို ရရှိလာတာပေါ့။ အဲဒါကို သူတို့က ခဲလာတဲ့အခြိနျမှာ စဈယူတယျ။ စဈယူပွီးရငျ အပူပေးတယျ။ အပူပေးပွီးတဲ့ အခြိနျမှာတော့ ကနြျောတို့ rare earth အောကျဆိုဒျကို ရရှိပွီဖွဈတယျ။ အဲလိုနညျးနဲ့ပဲ ထုတျတယျ။”
ဒီနညျးက ဘယျလောကျအထိ recover ဖွဈသလဲ ဆိုတော့ over 90 % အထိ ဖွဈတယျ။ ၉ ၀ ရာခိုငျနှုနျး ကြျောကြျောအထိ ဒီ မွရှေား သတ်တုကို ဖမျးယူနိုငျတာပေါ့နျော။ ဒါက တရုတျပွညျ ကနျြစီပွညျနယျ တလေြှာကျမှာ လုပျနတေဲ့ မွရှေားမိုငျးတှကေ ဒီ method နညျးကိုပဲ သုံးတယျ။ ဒီနညျးကတော့ Insitu leaching method ပေါ့နျော။ ဒီဟာနဲ့ အသုံးပွုပွီးတော့ ထုတျနကွေတယျ။”
မေး။ ။“ဟုတျကဲ့။ ဒီပနျဝါဒသေမှာတူးတာဖျေါတာက ပတျဝနျးကငျြအတှကျ အန်တရာယျရှိတဲ့ ဓါတု ပစ်စညျးတှေ သုံးပွီး ဖြျောထုတျပွီးတော့မှ မွရှေားသတ်တုကို ရဖို့သနျ့စငျရတယျ ဆိုတော့ ဒါဟာ ပတျဝနျးကငျြ အတှကျ ပကျြစီးမှုတှေ ဖွဈစပေါလားဆရာ။”
ဦးစောနောငျ။. ။“ဟုတျကဲ့။ ပတျဝနျးကငျြပကျြစီးမှုကတော့ တျောတျောကို ဖွဈစတေယျ။ ပွောမယျ ဆိုရငျ တရုတျပွညျ တောငျပိုငျး ဒီ ပနျဝါနဲ့ ဆကျနတေဲ့ နရောတှမှော တရုတျတှကေ ဒီ မွရှေားကို တူးကွတာပေါ့နျော။ တရားမဝငျပဲ တူးကွတယျ။ တူးကွရငျးကနပေဲ ၂၀၁၀ ခုနှဈရောကျတဲ့ အခြိနျမှာ တျောတျောကို ပကျြစီးသှားတော့၊ ပတျဝနျးကငျြတျောတျော ပကျြစီးသှားတော့ တရုတျအစိုးရက နပွေီးတော့ ၂၀၁၀ မှာ ပိတျပငျလိုကျတယျ။ ပိတျပငျလိုကျတော့ ဟိုမှာ လုပျနတေဲ့ တရုတျ မွရှေား လုပျဖူးတဲ့သူတှကေ ကနြျောတို့ နယျစပျကို ဖွတျပွီးရငျ ဒီပနျဝါထဲကို ဝငျရောကျပွီးရငျ ခိုးတူးလာကွတာပေါ့။ အဲလို ခိုးတူးလာတဲ့ အခြိနျမှာ ဘာမှ မကွာဘူး။ ဒီပနျဝါနားမှာ ရှိတဲ့ သူတို့လုပျကှကျနားမှာရှိတဲ့ ကြေးရှာတှေ ၂၀ လောကျ မှာ ရှိတဲ့ လြှိုမွောငျစိမျ့စမျးတှပေေါ့။ ဒီရတှေဟော တျောတျော ပကျြစီးသှားတယျ။ အခုအခြိနျမှာတော့ ဒီပနျဝါဒသေ ဒီမွရှေားလုပျတဲ့ ဝနျးကငျြတလေြှာကျမှာ ရှိတဲ့ ရဝေရေလေဲ တှကေ အတျောပကျြစီးနပွေီလို့ ကခငျြပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေး အဖှဲ့က ဆိုထားတယျ။ ပတျဝနျးကငျြထိခိုကျတာပေါ့။”
မေး။. ။“ဒီသနျ့စငျတဲ့ နရောကလညျး ကယျြပွနျ့တယျ ထငျတယျဆရာ။ ဒီရဝေရေလေဲတှေ အကုနျ ထိခိုကျတယျ ဆိုတော့။ သတ်တုတှကေ ဒီအဆိပျ ဓါတုပစ်စညျးတှေ ပွနျ့နှံ့တာက တျောတျော နရောကယျြပွနျ့နပွေီ ထငျတယျဆရာ။”
ဦးစောနောငျ။. ။“ဒီပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေး အဖှဲ့က ပွောတာကတော့ အတျောပကျြစီးသှားတယျလို့ ပွောတယျ။ ကနြေျာ့မိတျဆှတှေေ ဆီက ကွားရတာကလညျး ဟုတျတယျ ရတှေကေ သုံးလို့ မရလောကျအောငျကို ဖွဈသှားတာ။ ဒီပတျဝနျးကငျြမှာ ရှိတဲ့ ခြောငျးတှကေ ရတှေဟော သုံးလို့ မရအောငျ ဒီ poison အဆိပျခညျြးပဲ။ ထိရငျ ဒီအရခှေံ- အရပွေားမှာ ထိရငျ အရပွေား တခုခု ဖွဈတာပေါ့။ ဒီ skin disease အရပွေားရောဂါပဲ။”
မေး။. ။“ဆရာ ဒီလိုမြိုး ပတျဝနျးကငျြ ထိခိုကျ ပကျြစီးနတောတှကေို ဘယျလို တားဆီးနိုငျမယျ ထငျပါသလဲ ဆရာ။”
ဦးစောနောငျ။. ။“အစိုးရ အနနေဲ့ပဲ တာဝနျယူလုပျရမှာပဲလေ။ ဒီအစိုးရအနနေဲ့ အခုသတ်တုထုတျလုပျတာနဲ့ ပတျသကျပွီးရငျ နံမယျကောငျးရှိတဲ့။ အစဉျလာရှိတဲ့ mining သတ်တုတူးဖျေါရေး ကုမ်ပဏီတှကေို လိုငျစငျတို့ ပါမဈတို့ ထုတျပေးပွီး သတ်တုထုတျစတောကတော့ အကောငျးဆုံးပဲ။ ပွီးရငျတော့ သူတို့ စာခြုပျပါ စညျးကမျး အတိုငျး လုပျမလုပျ ဆိုတာကို ကနြျောတို့ သကျဆိုငျရာ သတ်တုတှငျးဌာန တာဝနျရှိတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှကေ အနီးကပျ၊ တခြိနျလုံး အနီးကပျ ကွီးကွပျဖို့ လိုတာပေါ့။ အဲဒီလိုမြိုး လုပျနိုငျမယျ ဆိုရငျတော့ အခုထကျ အ မြားကွီး ပကျြစီးတာ သကျသာမှာတော့ အသအေခြာပဲ။”
မေး။ ။“ဆရာ အခု လကျရှိမှာ မွရှေားသတ်တုနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ လုပျနတေဲ့ အခွနေပေေါ့နျော။ ဆရာ စောစောက ပွောသလိုဆို တရုတျနိုငျငံကပဲ လာပွီး တူးဖျေါနကွေတယျ ဆိုတော့။ တကယျဆို မွနျမာနိုငျငံမှာက တနိုငျတပိုငျ လုပျနတေဲ့ သူတှကေ အမြားကွီးရှိတယျ။ တကယျလို့ တနိုငျတပိုငျ လုပျနတေဲ့ မွနျမာတှေ ဒီမွရှေား သတ်တုကို တူးခငျြ ဖျေါခငျြတယျ ဆိုရငျ လုပျလို့ ရပါလား ဆရာ။”
ဦးစောနောငျ။. ။“လုပျမယျဆိုရငျတော့ လုပျလို့ ရတာပေါ့။ လုပျဖို့အတှကျ လုပျကှကျ ပါမဈ ရဖို့ လိုတယျလေ။ အခုကတော့ မရတော့ ခိုးလုပျနကွေတာကိုး၊ ခိုးလုပျတော့ ပိုပကျြစီးတာပေါ့။ လုပျလို့ ရပါတယျ။ မရစရာ မရှိဘူး။ ဒီ ဓါတုပစ်စညျးတှပေဲ အမှနျကတော့ လိုအပျတာပေါ့။ အဓိက ကတော့ ဒီ အမိုနီယမျဆာလျဖိတျရယျ။. သူက leaching လုပျဖို့အတှကျ လိုတယျ။ နောကျတခုက နောကျဆုံး ပွညျ့ဝပြျောရညျထဲမှာ မွနျမွနျ ခဲသှားအောငျ အတှကျကတော့ ဒီ အမိုနီယမျ ကာဗှနျနိတျ လိုတာပေါ့။
စောစောပိုငျးကတော့ ဒီမွနျမာတှထေဲက ဒီမွရှေားတှတေ့ယျ ဆိုတဲ့နရောမှာ ဒါတှကေတော့ residual (ကြှငျးစုသိုကျ) မြိုးတို့ clay (မွစေေးအမြိုးအစား) သိုကျမြိုးတို့ ။ secondary တှပေေါ့။ အဲဒါတှမှော ကတြော့ မွကေလညျး ပြော့တော့ ဒီ ဂဝံကြောကျမွမြေိုး မွစေေးမွမြေိုး တို့ကြ သူက ဘကျဟိုးတှနေဲ့ ကုပျပွီး ဒီထရပျကားတှနေဲ့ တငျပွီး သူတို့ ဒီတရုတျကလညျး ဝယျတယျ အရငျက။ နောကျပိုငျးကတြော့ ဒီလိုမဝယျတော့ဘူးလေ။ သူတို့က သနျ့စငျပွီးမှ ဒါကိုပဲ ယူတော့တယျ။ သူတို့ဆီမှာ ပတျဝနျးကငျြ အပကျြမခံဘူး ထငျတာပဲလေ။
ဘူမိပညာရှငျ ဦးစောနောငျပါ။ မွနျမာနိုငျငံက မွရှေားသတ်တု အလားအလာနဲ့ ဒီသတ်တုဘယျလောကျ အရေးပါတယျ ဆိုတာတှကေို ဆကျပွီး တငျပွပေးအုံးမှာပါ။
မြေရှားသတ္တုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ -အပိုင်း (၁)